Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Yetsika uye yazvino, serene uye chipatapata, China ndiyo imwe yenyika dzinonakidza kuongorora, kunyanya nechitima. Kuronga rwendo kuenda kuChina kunogona kukuremedza, saka taungana 10 matipi ekufamba kuenda kuChina nechitima. Kubva kurongedza kusvika…
Chitima Kufamba, Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba Matipi
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi Kana iwe uri kuronga yako yekutanga rwendo kuenda kuEurope, pane zvinhu zvishoma zvaunoda kuziva nezve maguta akanaka kwazvo pasi. isu takagadzira yakakwana gwara re 10 zvikanganiso zvekufamba iwe zvaunofanirwa kudzivirira muEurope. Rwendo kuenda ku…
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi Zororo remhuri muEurope rinogona kunakidzwa kwazvo kuvabereki nevana veese mazera kana uchironga zvakanaka. Europe ndiyo nyika yemizinda uye mabhiriji, mapaki akasvibirira, and reserves where young girls and boys can pretend to be princesses and…